“Madaxweyne, Khilaaf Adiga kaa Bilaabmaya Oo adiga kugu Dhamaanaya ayaa Maanta Dalka Haysta…” Sheekh Aadan-Siiro | Mandheera News
“Madaxweyne, Khilaaf Adiga kaa Bilaabmaya Oo adiga kugu Dhamaanaya ayaa Maanta Dalka Haysta…” Sheekh Aadan-Siiro
Hargeysa(Mandheeranews) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro) oo ka mid ah Culimada reer Somaliland ayaa Madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay in intii uu xilka qabtay ay Ummadda reer Somaliland kala fogaatay.
Sheekh Aadan-siiro oo Maanta Saxaafadda kula hadlay Hargeysa, ayaa waxa kale oo uu sheegay “Hoggaamiyuhu waa kee ? Hoggaamiyuhu waaka Dadka ururriya ee lagu ururo ayuu yidhi Rasuulku CSW, kaasaa Hoggaamiye ah. Madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa, ku xasuusinaynaa sidii dalka laguugu dhiibay inaad ku hayso oo aad dadka isku ururiso..” ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “khilaaf siyaasi ah baa jira, khilaaf ka dhashay deegaanadii, khilaafaadkaasi oo qaarkood adiga lagugu tuhmayo inaad adigu Madaxweyne Abuurayso.”
Sheekhu waxa kale oo uu ka hadlay dhaqaalaha Somaliland “Madaxweyne, waxaanu kaala talinaynaa dhaqaalaha. Shaqaalaha Xukuumaddu haysaa kama badna 40 kun, Somaliland waxa ku nool 4.5 Million ruux, yaa haya dadka inta kale Madaxweyne ?, waxa haya Ganacsatada, Islaamku waxyaabaha uu u yimid waxa ka mid ah in dhaqaalaha la ilaaliyo, in dhaqaalaha la kobciyo oo faqriga lala dagaalamo, Ilaa uu Ilaahay gaadhsiiyey oo uu yidhi haddii Qofku gaajoodo Meydka ha cuno. Haddii ay dadku baahdaan (gaajoodaan) waxay keeni in dalka Nabadgalyadiisu ay meel xun gaadho. Madaxweyne maxaad uga jeedaa inaad dhaqaalaha xidh-xidho, maxaad uga jeedaa Cashuur aan jirin oo afar-laab ah inaad dadka ku kalifto, maxaad uga jeedaa Madaxweyne in Dadkii boqollaalka qof ee shaqaalaha ah hayey aad curyaamiso, iyadoo nidaamkaagu uu sidaa u shaqaynayo. Madaxweyne waxaanu ku leenahay dhaqaalaha furfur.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Madaxweyne, Xukuumaddii kaa horraysay waxay ahaayeen Dad gob ah, maxaanu kalmaddaa u leenahay, waa lala hadli jiray, waddo loo maro ayay lahaayeen marka arrin uu yimaaddo, Adiga yaa wax ku sheegaya, dariiqee baa lagu soo marayaa Madaxweyne, dalkii oo dhan wuu soo ootay, kumanaan Meheradood baa kacay, yaa shaqo u samaynaya, shaqo waxaad ka barateen Cashuur, inan juwan la cararraya oo Macaashal-macaash ka sheekaynaya Meheradihii oo wada kacay, arrinta dhaqaalaha wax ka qabo Madaxweyne, inta aan guryaha la isugu soo gelin wax ka qabo ayaanu ku leenahay Madaxweyne..”
Ugu dambayn, Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud waxa uu ka hadlay doorashada “Doorashada in la qabtaa waa lagama maarmaan, Waayo? Doorashada waxaynu u dooranay in Ninkii damac lihi aanu dariiq kale soo marin, laakiin wixii doorashada suurto-gelinayey iyo in Dadka la qanciyo oo Dadka la isku ururriyo oo aan la abuurin khilaaf keenaya muddo-kordhin..” ayuu yidhi, isagoo intaa sii raaciyey oo ka digay in la abuuro khilaaf Xukuumaddu daraf ka tahay oo keeni kara muddo-kordhin.